China PVC / PU dahaarka bir xadhig silig boodboodka xadhig 3mm warshad 4mm iyo saarayaasha |Bangyi
Jimicsiga Jimicsiga Isboortiga Isboortiga Ka Booda Dhererka Xadhiga La Hagajin karo
Xawaaraha ka boodada Xadhkaha birta ah ee Xadhigaha Xadhigaha leh ee Aluminum Alloy Anti-Slip Handle for Fitness Isboortiga Kubbada Buluugga ah ee Qaadashada Xadhiggu waa mid la hagaajin karo oo ma qalloocin doono, kaas oo ka ilaalin kara maqaarkaaga inuu ku dhaco xanuun badan.
Shayga Aluminium Alloy Wire Jump Xarig
Qalab Xadhkaha Xadhkaha ee PVC+Aluminum Aloy gacanta
Cabirka Xadhig 0.25cm*300cm
Xakamaynta Cabirka 1.5cm*18cm
Midabka Xadhkaha Buluug, Casaan, madow, Cagaaran, Busug
Miisaanka 130 garaam
Xidhmada 1 pc oo ku jira bacda opp;ka dibna 100 pcs in caron
Cabbirka xirmada 25cm*22cm*5cm
SXadhig Xadhig Xadhig Xawaaraha Ka Booda Kubbada Xadhiga Leh Aluminium Alloy Ka-hortagga Sibidhka Handle ee Ciyaaraha Buluug
Xadhig boodboodka kubbadda waa la hagaajin karaa mana qalloocin doono, taas oo ka ilaalin karta in maqaarkaaga uu ku dhaco xanuun badan.
Xadhig ka boodidu waxa ay inta badan ka samaysan tahay Xoog badan, adkaysi u xidhan iyo walxo bir ah oo raagaya nolosha adeeg dheer.
Xadhig ka boodi ah oo bir ah ayaa leh gacan bir ah oo leh dareemo gacan raaxo leh, naqshadeeda khafiifka ah waxay sahlaysaa in la xajiyo xitaa inta lagu jiro jimicsiga xoogga badan.
Xadhiga bood-boodka oo leh naqshad khafiif ah ayaa aad ugu habboon boodboodka inta lagu jiro jimicsiga xoogga badan oo la qaadi karo.
Xadhiga boodboodka Xawaaraha wuxuu leeyahay hab-wareejin laba-geesood ah oo ah 360° wareejinta kubbadda cagta wuxuuna kordhiyaa awooddiisa wareegta wuxuuna ku siinayaa dabacsanaan weyn oo dhaqdhaqaaqa.
Ku boodista xadhigga leh aluminium aluminium ah, ka-hortagga simbiriirixidda iyo naqshadeynta gacanta fudud ayaa aad ugu habboon jirdhiska qoyska iyo jimicsiga dibadda, waxayna xallisaa dhibaatada isku-xidhka ee xargaha dhaqameed.Waxayna ku habboon tahay tababbarka MMA, xirfadlayaasha aqoonta u leh dhisidda jirka, feerka, aerobics-ka, iyo qalabka tababarka shaqsiyeed.
Xadhig ka booda
- Midabka: Cas, Buluug, Madow, Pink, Jaalle, Cagaar, Violet, Silver
Qalabka Xadhkaha: PVC+ Xarig galvanized xadhig
Qalabka gacanta: Aluminium Alloy
-Cabirka Xadhkaha: 0.25cm* 300cm
-Cabirka gacanta: 1.8cm* 16cm
Isku hagaaji boolal labada dhinac, dabacsan oo hagaaji dhererkaxadhigan sida loogu baahdo, ka dibna adkee this fur mar kale, ku haboonda' walba.
Baakad & Gaadhsiin
(1) oo lagu soo buuxiyay bac opp ka dibna 100 pcs oo kartoon ah
(2) xidho gogosha ama kiis alwaax ah.
(3) xirxiran sida shuruudahaaga.
Waxa aanu ku taageernay dalabka muunada ee caalamiga ah: Sida TNT, DHL, FedEx, UPS, EMS, iwm.
Waxaan ku soo rarinaa dalabka badan ee Badda, tareen, iwm.
Waqtiga wax soo saarka: 7-15 maalmood oo shaqo
1. Soosaar ahaan, waxaanu nahay shirkad isku-dhafan wax-soo-saarka warshadda iyo ganacsiga iyo iibinta.
2. Waxaan leenahay taariikh in ka badan toban sano.Intaa waxaa dheer, waxaan leenahay nidaamka iibka baaluq, kaas oo siin kara adeegyo xirfadeed macaamiisha our.
3. Shirkaddayadu waxay dhaaftay ISO, CE, SGS.
4. Waxaan u naqshadeyn karnaa oo soo saari karnaa alaabooyinka iyadoo loo eegayo cabbirka loo baahan yahay iyo qeexidda baahida macaamiisha kala duwan.
5. Waxaan aqbalnaa daabacaadda astaanta gaarka ah.
Hore: Iibinta Kulul ee Xadhkaha boodada dhijitaalka ah ee loogu talagalay Layliga La hagaajin karo ee Jump counterer
Xiga: Xadhig Bood oo Caadi ah Silig Bir ah oo leh Gacan-Dheer oo loogu talagalay Carruurtu Layliga Xawaaraha Ka Booda
Aluminium alloy gacanta ku bood xadhig
xakamee xadhig boodi
xawaaraha ka boodada xadhig
xadhig boodboodka, xakamee xadhig boodi, xadhig la'aan xad-dhaaf ah, xadhig xirfad leh, xadhig booda caqli, xadhig ka booda iibso,